कफी र मुटुको सम्बन्ध Archives - Nagarik Today
होम » कफी र मुटुको सम्बन्ध
मुटुलाई स्वस्थ राख्न हरेक दिन ३ कप कफी पिउन जरुरी छ । हरेक दिन ३ कप कफी पिउँदा २१ प्रतिशत स्ट्रोक र १७ प्रतिशत हृदयरोगको खतरा कम हुन्छ । हंगेरीको राजधानी बुडापेस्टस्थित सेमेल्भिस युनिभर्सिटीमा गरिएको अनुसन्धानले कफी र मुटु बीचको सम्बन्धलाई उजागर गरेको छ ।
उक्त अनुसन्धानको क्रममा कफिले कसरी मुटुलाई स्वस्थ राख्छ ? कति कप कफी पिउनु स्वास्थ्यलाई फाइदाजनक छ ? भन्ने जस्ता प्रश्नहरुको उत्तर खोज्ने प्रयास गरिएको थियो ।
युकेको बायोबैंकमा रेकर्ड भएका ४ लाख ६० हजार व्यक्तिहरूमाथि गरिएको अनुसन्धानमा कफी पिउने र नपिउने व्यक्तिमा कफीको प्रभाव र नपिउने व्यक्तिको अवस्थाको बारेमा खुलासा गरिएको छ । जसले जुन व्यक्तिले हरेक दिन ३ कपसम्म कफी पिउने गर्दछ उनीहरुको मृत्युको खतरा १२ प्रतिशत कम हुन्छ । भने, हृदयघात हुने सम्भावना १७ प्रतिशत कम हुन्छ । साथै, २१ प्रतिशत व्यक्तिमा स्ट्रोकको खतरा कम हुन्छ ।
कति मात्रामा कफी पिउने ?
अनुसन्धानकर्ताका अनुसार अनुसन्धानमा सहभागी व्यक्तिहरुको मुटुको एमआरआई स्क्यानमा कफीले मुटुमा पार्ने असरबारे अध्ययन गरिएको थियो ।जसअनुसार कफी नै नपिउने व्यक्तिको तुलनामा कफी सीमित मात्रामा कफी पिउने व्यक्तिहरुको मुटुले सन्तुलित रुपमा काम गरिरहेको र बढ्दो उमेरले मुटुमा पार्ने असर पनि घटाएको पाइएको छ ।
अनुसन्धानमा संलग्न डा. जुदित सिमोनले सीमित मात्रामा कफी पिउनु फाइदाजनक भएको बताए । उनले धेरै मात्रामा कफी पिउँदा शरीरलाई नोक्सान पुग्ने जानकारी दिए । उनले हरेक दिन ३ कफ कफी स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक भएको बताए ।
विशेषज्ञका अनुसार एक दिनमा ३ कपभन्दा बढी कफी पिउँदा स्वास्थ्यका लागि बेफाइदाजनक मानिन्छ । कफीमा हुने क्याफिनले मस्तिष्कको स्नायु प्रणालीमा असर गर्छ । क्याफिनको सेवनले भोक कम लाग्ने, तौल घट्ने जस्ता समस्या पैदा गर्छ । क्याफिनले शारीरिक र मानसिक रुपमा उर्जावान बनाउँछ । जसले गर्दा धेरै काम गर्ने र आराम गर्ने बानीको बिकास हुँदै जान्छ । यसले गर्दा विस्तारै उच्च रक्तचापको समस्या देखा पर्छ । त्यसैले क्याफिनको सही मात्राले शरीरलाई फाइदा गर्छ ।
भदौ १८, २०७८0comment